शर्मिला खडका (दाहाल), (काठमाण्डौ)
“हेमन्त सर अध्यागन विभागको एउटा केस छ हयान्डल गर्नुहुन्छ? दुइटी केटी बाहिरबाट आएका रहेछन् । कागजपत्र फर्जी रहेछ । अध्यागनका अफिसरले मिलाइदिने भनेर पैसा पनि असुल गरेछन् र यौवन पनि । ती केटीले उजुरी दिएका छन् । तपाईंको के विचार छ ?”
एसपी साहेबको यो अनुरोधलाई किनारा लगाउँदै म भन्छु, “सर मेरो खुट्टाको घाउ राम्रो निको भइसकेको छैन । केही समय इनडोर काम गर्ने विचार छ ।”
“ओके एज योर विस, टेक केयर ।” एसपी साहेबको प्रतिउत्तरले म निर्धक्क हुन्छु ।
अध्यागमनमा नयाँ केस आएको खबर मैले पहिले नै थाहा पाइसकेको थिएँ । सरकारी कर्मचारी भएर यस्तो गैरकानुनी र बेइज्जत हुने काम गर्न यी कर्मचारी किन लाज मान्दैनन् । मलाई ताज्जुव लाग्दछ । अध्यागनमजस्तो अन्तराष्ट्रियस्तरमा पहिचान हुने ठाउँमा यस्तो भष्ट्राचार र अनैतिक कार्य हुन्छ भने अन्तको कुरा के रहयो र ? हुन त हाम्रै प्रहरी विभागमा पनि यो कहाँ कम छ र ? अहिले देशका वर्दी लगाएका चोरहरू नै पुलिस हुन् भनेर मानिसहरू भन्छन् । केही फटाहा व्यक्तिहरूले गर्दा हाम्रो पेशाको नै वदनाम भइरहेको छ । फेरि पार्टीको नेताहरूको गोटी चलाइमा पहिलो शिकार पुलिस नै हुने गरेका छन् । यस पेशामा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट भएर टिक्नै गाह्रो भइसक्यो । तर पनि मैले त समाजको सेवा गर्ने कसम खाएको छु । हामीजस्तो प्रहरीले डटेर नै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । त्यसैले त म बाहिर जिल्लामा जाँदा सबै गुण्डा, नायके र कालाबजारिया थर्कमान हुन्छन् । अहिलेसम्म मैले आफ्नो सङ्कल्पबाट कतै दायाँबायाँ हुनुपरेको छैन तर थाहा छैन कुन दिन म पनि त्यही धमिलो पानीको गन्हाउने फोहर भएर बग्नेछु । तर पनि जे जस्तो अवस्थामा पनि मेरो देश, मेरो जनता र मेरो समाज को सुरक्षा नै मेरो जीवनको अन्तिम लक्ष्य हुनेछ । अफिसमा आउँदा प्राय मेरो मस्तिष्कलाई यस्तै कुराले तरङ्गित बनाइरहेको हुन्छ ।
डेढ महिनापछि आजैमात्र अफिसमा मेरो आगमन भएको छ । त्यसैले पनि अफिसियल काममा मेरो मुड त्यति गएको छैन । कम्प्युटर अन गर्छु । एउटा लामो मेलले मेरो जागिरे समय खाइदिन्छ । इमेल यस प्रकारको थियो –
अहिले कस्तो हुनुहुन्छ ? सायद जाती भइसक्नुभयो होला । पत्र कहाँबाट सुरु गरु ? अल्मलिएकी छु । एउटा बेग्लै संसारको कथा भन्नु छ मैले । कहाँबाट लिपिबद्ध गरु ? म असमञ्जसतामा परेको छु । जब तपाईं घाइते भएर अस्पतालको वेडमा हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँबाट हाम्रो कथा सुरु हुन्छ ।
सर्जिकल वार्डमा प्राय मेरै ड्युटी हुन्छ । तपाईको खुट्टाको अप्रेशन भएपछि वार्डमा तपाईंको सम्पूर्ण स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने जिम्मा मेरै थियो । तपाईंलाई देखेको पहिलो भेटमा नै मलाई यस्तो लाग्यो मानौँ यी दुई जोर आँखासँग म पहिलै नै बोलेको छु, कतै भेटेको छु । यी दुई आँखा मेरा आफनै आँखा हुन् । मलाई किन यस्तो लाग्छ ? मलाई थाहा छैन । एउटा नर्सले तपाईंजस्तो धेरै विमारीको स्याहार गर्नुपर्छ । तर ती दुई आँखाले मलाई किन तानिरहेको छ ? के रहस्य छ ? म जान्न खोज्दथे तर असफल हुन्थे । विस्तारैविस्तारै तपाईंको बारेमा थाहा हुँदै गयो । तपाईं पुलिसफोर्सको डिएसपी हुनुहुँदो रहेछ । तपाईंको लागि दुईजना प्रहरी हरदम खटाइएका हुन्थे । विद्यार्थीहरूसँग झडप हँुदा तपाईंको खुटामा ठूलो चोट लागेको रहेछ । अनि अस्पताल भर्ना हुनुपरेको रहेछ । तपाईंको खुटाको बीचको हडडी फुटेको हुनाले अप्रेशनगरी खुट्टालाई वेट दिई तानेर राखिएको थियो । यो निकै कष्टकर थियो ।
तपाईंलाई एक महिना अस्पताल बस्नुपर्ने थियो । किन हो मलाई तपाईंको समीप्यताको मीठो आकर्षणले हरपल सताइरहन्थ्यो । मलाई यसरी पुरुषप्रति आर्कषणको अनुभूति कहिल्यै भएको थिएन । मसँगैका मेरा दिद्रीबहिनी वा साथीहरूका थुप्रै लभअफेयर चल्दथ्यो । तर मेरो त्यस्तो भएन । मेरो आमा भन्नुहुन्थ्यो— “यो त लेब्जियन हो कि क्या हो ? कुनै केटाहरूसँग संगत गरेको पनि देख्दिनँ ।”
हुन पनि हो मलाई पुरुषहरूप्रति खासै आकर्षण थिएन । अझ पुलिस विभागका मानिसहरूप्रति मेरो नकरात्मक सोचाइ थियो । बिस्तारै तपाईंका बारेमा मलाई धेरै कुरा थाहा भयो । तपाईं राम्रा कथा, निबन्ध, र लेखहरू लेख्नु हुदो रहेछ । एकदिन तपाईंको छेउमा तपाईंको पुस्तक देखेँ ।
मैले सोधेँ, “सर पुस्तक लेख्नुहुन्छ ?”
“हो लेख्छु । तपाईलाई पढन फुर्सद छैन होला ?” तपाई प्रश्नात्मक अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ ।
“किन नहुनु ! यस्तो किताव पढ्ने रुची छ तर उही हो समयको अभाव त सबैलाई हुन्छ ।’
तपाईंको घाउको डेसिग गर्ने क्रममा यो गफ भएको थियो ।
“तपाईंको घर कहाँ नि ?’
“मेरो कुपन्टोल । तपाईंको अर्घाखाची होइन मैले फाइलबाट नै थाहा पाइसकेकी छु ।”
यसरी हाम्रो छोटो संवाद हुन्थ्यो । बेलुका घर आउँदा भोलिपल्ट तपाईंसँग धेरैभन्दा धेरै गफ गर्छु भन्ने सोच्दथेँ तर तपाईंको सामु पुग्दा केही बोल्न नसक्ने हुन्थेँ । एकातिर पुलिकफोर्सका मानिस कडा मिजासका हुन्छन भन्ने सोचाइले मेरो मस्तिष्का भाइरल आक्रमण गरेको थियो । त्यसैले पनि म यो रोगबाट ग्रसित थिएँ । अर्कोतिर तपाईं कुनै गहिरो अध्ययन वा चिन्तनमा लागेको देखिन्थ्यो । त्यसैले पनि प्राय गम्भीर मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो । प्रत्येक बेलुका तपाईंंसँग खुलेर बोल्न नसकेको पीडाले मलाई जलाउँदथ्यो । एकदिन मैले तपाईंको पुस्तक पढ्न मागेँ । तपाईंंले पनि खुसीका साथ मलाई पढन दिनुभयो ।
बेलुका घरमा आएर तपाईंको पुस्तक पढ्न थालेँ । पुस्तक पढ्दै जाँदा मभित्र केके हुँदै गयो । मैले बुझ्न सकिनँ मलाई यो के भएको हो भनेर । पुस्तकका शब्दहरू मैले धेरै अघि पढिसकेको हुँ जस्तो लाग्यो । यी शब्दहरू मेरा आफ्रनै हुन जस्तो लाग्यो । रातभरमा पुस्तक पढिसकेँ । पुस्तक राष्ट्रप्रेमले र नयाँनयाँ विचारले भरिएको थियो । यो पुस्तकले मलाई एउटा बेग्लै संसारमा पुर्याएको थियो । म सामान्यबाट असामान्य बन्दै गएकी थिएँ । मेरो मस्तिष्कले ठीक काम गर्न सकिरहेको थिएन । भोलिपल्ट म ड्युटिमा नै जान नसक्ने भएकी थिएँ । चक्कर लागेजस्तो भयो । खान मन लागेन । म विमार भएको कुराले घरमा खैलाबैला मच्चियो । हाम्रो समाज कति अन्धविश्वासी छ भनेर मैले भन्नै पर्दैन । डाक्टरी विमारको लक्षण नदेखेपछि मलाई माताजीकोमा लगियो । माताले भन्नुभयो, “यिनलाई आत्माले दुख दिएको छ । एक्लै नछोड्नू, यो फूल र अक्षता सिरानमा राखिदिनू ।“ मलाई के भएको हो मलाई थाहा भएन । भोलिपल्ट म बेहोश भएछु । बेहोश भएर ब्युझँदा मलाई एउटा कुनै फिल्म हेरेर निस्केजस्तो भएको थियो । त्यो फिल्मको कथा यस्तो थियो —
यो कुरा झन्डै एक सय वर्षअगाडिको थियो । त्यसबेला काठमाडौँमा राणाहरूको निरकुश शासन थियो । जनताको घरको देवलमा ‘श्री ३ महाराजकी जय’ भनेर लेखिएको हुन्थ्यो । ठहिटीको एउटा सुन पसलेकोमा मेरो जन्म भएको थियो । मलाई रत्नमाया भनेर बोलाउँथे । तीनभाइ मुनिको एउटै छोरी भएकी हुनाले बाआमाले असाध्यै माया गर्दथे । त्यो बेला छोरीमान्छेले पढ्ने चलन थिएन तर मेरो हजुरवुवाले मलाई धेरै माया गर्नेहुनाले घरमा नै पढाउनुभएको थियो । तीन दाजुहरु दरवार हाइस्कुल पढ्न जान्थे तर मलाई पठाइँदैनथ्यो । मैले यस कुराको विद्रोह गरेँ । विद्रोह गरेपछि मलाई घरमा नै गुरुदाई राखेर पढने व्यवस्था मिलाइयो । त्यसबेला छोरीलाई पढाइयो भने झ्यालबाट चिठी लेख्छन् र पोइल जान्छन भन्ने चलन थियो । मेरो घर छेउमा नै पूर्णमाया नाम गरेकी साथी थिई । उसको घरमा म आउने जाने गर्दथे । त्यस समयसम्म मेरा धेरै साथीहरूको विवाह भइसकेको थियो । छोरीहरूको प्राय दस एघार वर्षमा विवाह भइसकेको हुन्थ्यो । म एउटै छोरी भएकीले बाआमाले मलाई छिटै विवाह गर्न रुची देखाएनन् । पछि विवाह गर्न केटाले जन्मकुन्डली लिएर जान्थे र केही नभनी फर्काउँथे । कुरा के रहेछ भने मेरो जन्मकुन्डली विवाह हुनुवित्तिकै दुलाहाको मृत्यु हुने जोग परेको रहेछ । यो कुराले मेरा बाआमालाई ठूलो चिन्ता परेको थियो । साथी पूर्णमायाकोमा जाँदाजाँदै मेरो भेट उसको दाजु हिराकाजीसँग भयो । हिराकाजी पढेलेखेका जवान युवा थिए । म उनको व्यक्तित्वबाट प्रभावित थिएँ । उनी हाकी, निडर, बोलक्कड थिए । मलाई भेटतै पिच्छे जिस्काउँथे । म लजाउँदै भाग्दथे । उनलाई हेरुँ–हेरुँ, भेटँु–भेटुँ, बोलुँ–बोलुँझैँ लागिरहन्थ्यो । मेरो उमेर पनि पन्ध्रबाट सोह्र लागिसकेको थियो । हिराकाजी राणाविरोधी सस्था ’प्रचन्ड गोरखा‘मा गुप्तरूपले काम गर्दा रहेछन् । उनी राणा शासनको विरोधमा लेखहरू लेख्ने, छाप्ने र पर्चा बनाइ बाँड्ने गर्दथे । उनी मलाई आफ्ना लेखहरू पढन दिन्थे र कसैलाई नभन्नू भनी भन्दथे । म पनि उनको लेख पढ्न औधी रुची राख्दथेँ । म उनलाई काममा पनि सघाउँथे । यसरी क्रान्तिकारी मोडमा हामीबीच आत्मीक प्रेमले स्थान पायो । त्यस समय केटीहरू त्यति बोल्ने चलन थिएन तर हिराकाजीको एकोहोरो मप्रतिको आकर्षणले मभित्रको लाज, डर, धक सबै हराउँदै गयो । कहिलेकाहीँ हामी घन्टौँ गफ गरेर विताउँथ्यौँ । हिराकाजी राणाको विरोधमा तन,मन, धन दिएर लागेको थियो । हामीले विवाहगरी राणा शासन हटाउन जस्तोसुकै क्रान्तिको बाटो रोज्न परेपनि रोज्ने कसम खाएका थियाँै । हिराकाजीको ज्यानको खतरा थियो । राणाले थाहा पाएमा जुनसुकै बेला पक्राउ गरेर मार्न सक्दथ्यो । उनी आफ्नो असुर्िक्षत भविष्य मला्ई सुनाउँदै पीर मान्थे । हामी दुई यो जन्ममा भेट नभए अर्को जन्ममा भेट हुने वाचा गर्दथ्यौँ । ऊ अर्को जन्ममा सेनाको जागिर खा्एर राणाहरुजस्तै कर्णेण, जर्नेल बन्ने सपना देख्दथे भने म समाजसेवा गर्ने भाव व्यक्त गर्दथेँ । म भन्थेँ, “तपाई कर्णेल, जर्नेल हुनुभयो भने राणाजस्तै हुनुहुन्छ होला ।”
उनी भन्दथे, “होइन म राणाहरूको ठीक उल्टो काम गरेर समाजलाई देखाउँछु ।”
यसरी हामी बीच वार्तालाप हुन्थ्यो । हामी बीचको सम्बन्धको बारेमा टोलमा गाइँगुइँ हल्ला चल्न थाल्यो । हाम्रो जात पनि मिल्ने हुनाले बाआमाले हाम्रो विवाह गरिदिने विचार गरे । केटा राणाहरूको विरोधमा लागेको हुनाले मेरी आमाले आनाकानी गर्नुभयो तर घरमा सबैले छोरी तरुणी भएकीले विवाह गरिदिनुपर्ने मनसाय राखे । हाम्रो विवाहको तयारी हुनथाल्यो ।
वि.स. १९९७ मा सहिदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त, दशरथ चन्द लाई मारेको झन्डै दसवर्ष अघि वि.स. १९८८ सालको कुरा हो, त्यसबेला श्री ३ प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको निवास टङ्गालमा थियो र रोलक्रम अनुसार महाराज हुन ठीकठाक भएका कमाण्डर इन चिफ जुद्ध शमशेर जाउलाखेलमा बस्दथे । पुतलीसडक नबनेको त्यसबेलामा जुद्ध शमशेरलाई जाउलाखेलबाट भीमशमशेर कहाँ पु्ग्न कालिकास्थान हुँदै डिल्लीबजारबाट टंगाल पु्ग्नु पर्ने थियो । डिल्लीबजारको मोडमै, बग्गीमा सवार हुने जुद्ध शमशेर र उनका सँगै आएका राणाहरूलाई बमले स्वाहा बनाउने योजना प्रचण्ड गोरखाले गरेको थियो । तर यो विरोधको पोल खुल्यो । पोल खुलेपछि प्रचण्ड गोरखाका मैनाबहादुर, खण्डमान सिँह, खड्गमान सिँह, उमेशविक्रम शाह, रंगनाथ, नानीकाजी सिजापतिसँगै हिराकाजी पनि पक्राउ परे । एकातिर विवाहको तयारी भइरहेको थियो भने अर्कोतिर हिराकाजी पक्राउ परेर जेल परेका थिए । हिराकाजी पक्राउ परेपछि म विक्षिप्त बने । उनलाई छुटाउन उनको घरकाले धेरै प्रयास गरे तर राणाहरूको दमन चरमोत्कर्षमा थियो त्यसैले सकेनन् । म निडर र हाकी पनि थिए । फेरि हिराकाजीको संगतले मभित्र एकप्रकारको आत्मविश्वास पलाएको थियो । एकदिन म आफै आँट गरेर जेलका वडाहाकिमलाई भेट्न गए । मैले गएर विन्तिभाउ गरेँ तर बडाहाकिमले उल्टै मलाई आरोप लगाई जेलको कालो कोठामा थुनी दिए । यतिमात्र नभइ उनले मलाई बलात्कार गरे । मैले कति रोइकराइ गरे, विरोध गरे तर सकिनँ । मेरो जीवन यही कालकोठामा बित्ने रहेछ भन्ने लाग्यो । उसको पापको परिचय मेरो पेटमा बढ्न थाल्यो । जेलमा खाना राम्रो थिएन । म दिनदिनै राणाहरूलाई सक्दोसराप गर्दथे । मेरो सरापले होला राणाविरोधी कार्यहरू देशमाभित्रभित्रै उत्कर्षमा पुग्दै थियो । देशमा महान सहिदहरू राणाशासन खतम गर्न ज्यानै फ्याकेर लागेका थिए ।
एकदिन बलात्कार गर्ने हाकिम आएर भने, “यसका दुलाहाका अगाडि यसलाई लगेर राख । यिनीहरूको इश्क भएको रहेछ । विवाह अघि नै बच्चा पाउने भएकी रहिछ ।”
मलाई त्यो हाकिमप्रति घोर घृणा जाग्यो उसको मुखमा थुक्दै भनेँ, “पापी, अत्याचारी, पाप र धर्मको होस राख् । राणाहरूको जुठो खाएर कतिदिन बाच्छेु भन्छेस्, तैँले एकदिन मर्नैपर्छ ।”
मैले यसरी हाकिमको मुखमा थुक्नु ठुलो साहस थियो । उसले मलाई कोर्रा हान्न लगायो । मलाई हिराकाजीले देख्नेगरि सामन्नुको कोठामा राखिएको थियो । हामी आँखाबाट बोल्थ्यौँ, आँखाबाट नै मनको कुरा व्यक्त गर्दछौँ । मेरो अवस्था देखेर हिराकाजीको आँखामा कोही बेला आक्रोश देखिन्थ्यो भने कोहीबेला लाचारी र विवशता देखिन्थ्यो । मेरो हालत दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको थियो ।
एकदिन हिराकाजीलाई उसको कोठामा देखिनँ । जेलमा हल्ला चल्यो हिराकाजीलाई राती नै लगेर मारियो भनेर । यो सुनेर म वेहोश भएँ । म वेहोश भएर होशमा आउँदा वैद्य नजिकै थियो । यसरी जेलमा वैद्य आउनुलाई विशेष कारण मानिन्थ्यो । वैद्य आउनुको रहस्य मैले बुझ्न सकिनँ । त्यसैपनि मेरो जीवनको पनि कुनै भर थिएन । कुनै दिन लगेर मार्न सक्थे । तर दोजिया त्यो पनि स्त्रीलाई मार्नलाई सितिमिति आँट गदैनथे । वैद्यले मलाई औषधि खानु भनेर दिएर गयो । अझ एउटा गोली आफै बसेर खुवाएर गयो । यो औषधि खुवाउनुको के रहस्य होला भन्ने मैले बुझ्न सकेकी थिइनँ । म धमाधम औषधि खाँदै गए । यसको तीनचार दिन पछि थाहा भयो जब म रगतको भेलमा डुब्न पुगेकी थिएँ । पेट दुखेर खपिनसक्नु भयो । मेरो शरिरबाट रगतको खोला बग्न थाल्यो मेरा हातखुट्टा लुला हुँदै गए । त्यसपछि मैले वैद्य बोलाउनाको रहस्य थाहा पाए । त्यतिन्जेलमा धेरै ढिला भइसकेको थियो । त्यसै पनि मेरो बाच्ने इच्छा मर्दै गएको थियो । मेरा आँखा सदाको लागि बन्द भयो । हाम्रा आत्माहरूले मिलन नभई विछोडको पीडा सहनुपरेको थियो । यो कथा इतिहासमा नलेखी हरायो । तर हाम्रो आत्मा यही कथा बोकेर भटकिरह्यो र यो जन्ममा हाम्रो भेट भयो ।
मैले पहिलो भेटमा नै तपाईंको आँखामा उही प्रेमको कथा पढेकी थिएँ । तपाईंको पुस्तकमा उही हिराकाजीको राष्टप्रेमले भरिएको निबन्धहरू पढेकी थिएँ । उही शब्द, उही शैलीले मलाई मेरो पुर्नजन्मको कथामा पुर्याएको थियो ।
आठ दिनसम्म घरमा विमारी भएर बस्दा तपाईंको डिस्चार्ज भइसकेको रहेछ । तपाईंले पनि मेरो विषयमा वार्डमा धेरै जनालाई सोध्नुभएछ । तपाईंको गार्डले जिस्काउँदै भन्यो रे, “सरले आकाङ्क्षा सिस्टरलाई निकै खोज्नु भयो सर । केही छ सर ? हामीले पार्टी खान पाउने हो ?”
तपाईंले उसलाई हकार्दै भन्नुभयो रे, “चुप लाग । तिनले मेरो किताब लगेकी हुनाले सोधेको हुँ । हेर यी केटीहरूको चक्करफक्करमा मलाई नलगाओ । यी केटीहरू मायाका जाल होइनन आपतका जाल हुन् । यिनले गर्दा नै पैसा कमाउन प्रहरीहरू अनैतिक काम गर्छन् । त्यसैले तिमीहरू मलाई यस्ता कुरामा जाल बुन्दै फसाउने प्रयास नगर ।”
तपाईंको कुरा सुनेर ती गार्डहरू डराए रे अनि ‘माफ गर्नुस सर’ भनेर माफी मागे रे । मैले वार्डमा यो हल्ला सुनेको थिएँ ।
त्यसपछि समय यथावतरूपमा चलिरह्यो । मेरो हदयको अन्तकुनामा कोरिएको मेरो कथाको सागरमा पौड्दै म आफ्नो जीवनको डुङ्गा खियाइरहेकी थिएँ । मैले धेरै चोटि साहस गरेँ तपाईं यी कुरा बताउन तर सकिनँ । मेरो कथालाई विश्वास गर्ने कुनै आधार थिएँ । प्रमाणको आधारमा ठीक बेठीक छुट्टयाउनेको लागि मेरो कथा हास्यास्पद हुनसक्थ्यो । घरमा मेरो विवाहको कुरा गाइँगुइँ चल्न थाल्यो । अन्तिममा मेरो विवाह हुने निश्चित भयो । मेरो बाआमालाई मैले विवाह नगनुको स्पष्टिकरण दिनुपर्ने भयो । अमेरिकामा डिभी परेर उहीको ग्रिनकार्ड पाइसकेको केटा नसिङ पढेको केटीको खोजीमा रहेछ । उसले मलाई देखेपछि नाइँ भन्ने कुरा नै भएन । तर मैले नाइँ भन्ने कुनै बहाना पाउन सकिनँ । बाआमाको लागि सम्पत्ति जतिसुकै भए पनि छोरी धेरै हुदो रहेछ । उनीहरू ‘कि केटा देखा कि त विवाह नगर्नुको कारण बता’ भन्न थाले । मैले कारण प्रस्टाउन सकिनँ त्यसैले तपाईंलाई गुहार्न यो मेल लेख्ने साहस गरेँ । अमेरिका पुगे पनि मेरो आत्माले त्यो खुसी पाउन सक्दैन जुन खुसी मैले ती जोर आँखामा देखेकी छु । मलाई उही आँखा, उही शब्दले लखेटिरहनेछ । म मेरो उही कथाको सागरमा निस्सासिने गरी डुबीरहनेछु । मलाई लाग्छ मेरो जीवनको उददेश्य भने पनि प्राप्ति भने पनि गन्तव्य भने पनि तिनै आँखा हुन् । ती आँखाका सम्मोहनबाट फुत्किएर म अन्त टाढा कतै पनि जान सक्दिनँ । प्रेम शाश्वत हो । अमर हो । हामी दुईको अतृप्त आत्माले यो जन्ममा पूर्णता पाउनै पर्छ । नत्र अर्को जन्ममा पनि हामी तडपिरहेको हुनेछौँ ।
—सिस्टर आकाङ्क्षाको यो कुराले मेरो हृदय हल्लाइदियो । कस्तो खालको कुरा हो भनेर । मैले यी सब कुरा सजिलै विश्वास गर्न सकिरहेको थिइनँ । मैले अफिसियल काम खासै गर्न नपर्ने हुनाले पुर्नजन्मwedding tents rental सम्बन्धित वेवसाइड हेर्न थालेँ । यस्ता घटनाहरू धेरै ठाउँमा घटिसकेको रहेछ । एकठाउँमा पुर्नजन्मसम्बन्धि यस्तो कुरा लेखिएको थियो —
पुर्नजन्म र यसको वैज्ञानिक कारण
वर्तमान समयमा पुनर्जन्म एउटा धार्मिक सिद्धान्तमात्र नभइ विश्वविद्यालय र परामनोवैज्ञानिक सस्थाहरुको प्रमुख अनुसन्धान कार्य भएको छ । जसलाई आज अन्धविश्वास मात्र नभइ सृष्टिको आगमनको तथ्यात्मक रुप मानिएको छ । यसमा उर्जा सिद्धान्त लागु हुन्छ । जसरी उर्जाशक्ति नाश हुन सक्दैन । त्यस्तै चेतना पनि नाश हुन सक्दैन । हाम्रो शरीर पाँचparty tents for sale भौतिकतत्व मिलेर बनेको हुन्छ । कुनै पनि समय हाम्रो आत्माले यो पञ्चभूत तत्वलाई छोडेर जान सक्छ र फेरि कुनै निर्धारित समयमा यसले पहिलो जन्ममा गरेको कर्म र संस्कारको आधारमा पुर्नजन्म लिन सक्दछ । यसलाई कतिपय वैज्ञानिकले अन्धविश्वास मानेका छन् भने कतिपय वैज्ञानिकले वास्तवविकरूप मानेर अनेकौँ अनुसन्धानको कार्य भइरहेको छ ।
मेलको कुरा अझै सकिएको थिएन । म पढ्न थालेँ ।
हो तपाईंलाई लाग्न सक्छ के मान्छेको पुर्नजन्म हुन्छ र ? तर यसैको शक्तिले तपाईंमा घटेको एउटा घटना म बताउन सक्छु जसले तपाई विश्वासको चुचरोमा पुर्याउन सक्छ । एक पल्ट तपाईले एउटा बुढी मान्छे मारेको केस लिनु भएको थियो । ती बुढी मान्छेलाई अपराधीहरूले गरगहना लुटेर बलात्कार गरेर मारेका थिए । धेरैदिन सम्म अपराधी पत्तालगाउन नसक्दा तपाईले इश्वरको मदत माग्नु भएको थियो । सपनामा कसैले तपाईंंलाई बताएर त्यो ठाउँमा छापा मार्न जाँदा अपराधी भेटिएका थिएँ । नभन्दै तपाईंं सफल हुनुभएको थियो ।event tents
—मलाई अचम्म लाग्यो । उनले यो कुरा कसरी थाहा पाइनँ भनेर । मैले यो कुरा कसैलाई भनेको थिइनँ । यो केसमा साँच्चै नै मैले अपराधीहरू पत्ता लगाउन नसकेर विभागबाट गाली खाइरहेको अवस्थामा कसैले सपनामा मलाई त्यो ठाउँको पत्ता बताइदिएको थियो । साँच्चै नै त्यहा अपराधीहरू तास खेलेर लुकेर बसेका थिए । जुन घटनाले मैले विभागबाट बधाइमात्र होइन इन्सपेक्टर बाट बढुवा भएर डिएसपीको पद पाएको थिएँ । तर उनले कसरी थाहा पाइन म मनमनै कुरा गुन्दै उनको मेल पढन थालेँ ।
हो त्यो पुर्नजन्मको शक्ति हो । पवित्र प्रेमको शक्ति हो । हाम्रो अतृप्त आत्मा धेरैसमयसम्म भटकिरह्यो । त्यसपछि हामीले पुर्नृजन्म पायौँ । तपाईंले सोचजस्तो सेनाको जागिरखाने भनेकोमा इन्सपेक्टर बन्नुभयो मैले सोचेजस्तो wedding tents म समाजसेवाका लागि नर्सको पेशामा लागेँ । हामी दुवैको उददेश्य पुरा भएको छ ।
—सिस्टर आकाङ्क्षाको कुराले म अझै अचम्मित बनेँ । के उनले भनेका कुरा सही हुन ? के हाम्रो पुर्नजन्म भएकै हो त ? के हाम्रो मिलनले मैले सोचेजस्तो देश र समाजको सेवा गर्न सक्छु ? के पवित्र प्रेमको शक्ति यति ठूलो हुन्छ ?
हो प्रेमको अर्थ मिलन मात्र होइन । हामीले मिलनलाई मान्यता दिएनौँ । यदि हामीले मिलनलाई मान्यता दिएको भए पहिलो जन्ममा नै हामी भागेर विवाह गथ्र्यौ र घरजम गथ्यौँ । तर हामीले मिलनलाई प्राथमिकता दिएनौ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै देश र समाज थियो । यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने यो जन्ममा पनि हामी अलग बस्न सक्छौँ । केहीदिनपछि मेरो विवाह हुँदैछ । विवाह भएर म अमेरिका जानेछु । सायद तपाई पनि आफ्नो जीवन आफ्नै खुसीमा बाच्नुहुनेछ । तर हामी दुवै कुनै बेला यसरी नै भेट भयौँ भने हाम्रा आत्माहरू भटकिनेछ । तर यो जन्ममा हाम्रो मिलनको बाधक कोही छैनन् । हामी हाम्रा आत्मालाई शान्ति दिन सक्नेछौ अनि जीवनलाई सार्थकता दिन सक्नेछौँ । एउटा पवित्र प्रेमको शक्ति यो पनि हुनेछ कि मेरा शब्दहरूले तपाईंलाई उद्वेलित पारिरहनेछ । अगाडि तपाईंको इच्छालाई छोड्दै मेरा कुरा यही टुङ्ग्याउँछु ।event tent
सिस्टर आकाङ्क्षााको मेल पढिसक्दा म साँच्चिकै उट्ठेलित हुन पुग्दछु । उनले मभित्र रहेको राष्ट्रप्रेम र समाजप्रेमलाई नजिकबाट बुझेकी थिइनँ । यो कसरी भयो ? एउटा केटीले प्रेमीलाई लेख्ने पत्र यस्तो त कदापि हुन्न । उनी त माया प्रेमको मात्र कुरा लेख्न सक्छे । तर उनले त पहिलो जन्मदेखि लिएर मेरो अहिलेको जीवनको रहस्यमय कुरा पनि खोतलेकी छिन् । साँच्चै भन्नुपevent tents र्दा उनले मेरो जीवनलाई सिटिस्क्यान गरेर नै देखाइदिएकी थिइनँ । उनको यो रहस्यमय कुराले म आकर्षित र आन्दोलित हुँदै गएँ ।
साँच्चैभन्नुपर्दा अस्पतालमा हँदा देखि नै म उनीप्रति आकर्षित थिएँ । म यसरी केटीप्रति आकर्षित हुँदा आफैलाई अचम्म लागिरहेको थियो । अहिले आकाङ्क्षाले मलाई आफुले आफैलाई ऐनामा हेरेर छर्लग देखेजस्तो देखाइदिएकी थिइनँ । मलाई आफुले आफैलाई पढेजस्तो लागिरहेको थियो ।
धेरैसमयसम्म सिस्टर आकाङ्क्षाको कुरालाई मनमा मनन गरेर प्रतिउत्तर लेख्न बसेँ ।tents for weddings
तपाईंका कुराले वास्तवमा नै म उद्वेलित भएको छु । वास्वतमा यी सबकुरा कसरी हुन्छन् म भन्न सक्दिनँ । तर अप्रेशन गरेपछिको अथाह पीडामा तपाईंले मेरो निधारमा हात राख्नुहुँदा नै मैले असीम आनन्दको अनुभूति गरेको थिएँ । मेरा सारा पीडा हराएका थिए । तपाईको प्रत्येक व्यवहारबाट मलाई प्रिये लाग्दथ्यो । मैले आफूभित्र रहेको यही राष्ट्रप्रेमले गर्दा नै विवाह नगर्ने भनेर सङ्कल्प गरेको थिएँ । तर तपाईजस्तो एउटा सुशील सुन्दरी पाउँदा म आफुलाई भाग्यमानी ठानेको छु । मेरो भावाना मेरो विचार बुझ्ने जीवनसाथी पाउन पाए म कदापि अस्वीकार गर्ने छैन । तपाईंले जुन पुर्नजन्मको कुरा गर्नुभयो । त्यसलाई हामी कुनै काल्पनिक कथा, wedding tent for sale विनिर्मित वा पुर्नजीवित कथाको उपमा दिन सक्छौँ । हामी हाम्रो आत्मिक प्रेम र राष्ट्रप्रेमको फ्युजन गराएर धेरै गरिव दुखीको हदयमा मलहमपट्टी लगाउन सक्छौँ । हामी हाम्रो जीवनको उद्देश्यमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै अघि बढ्न सक्छौँ र जीवनलाई सार्थक बनाउन सक्छौँ । तपाईंंको साथ पाए भने मेरो जीवन अवश्य नै सफल हुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई । हामी चाँडै नै एकअर्काको भावना र हदयको नजिक हुनेछौँ । अहिलेलाई विदा ।
“सिस्टर आकाङ्क्षा हुनुहुन्छ ?”
“बोल्दैछु । ”
“म हेमन्त ।”
“एऽऽ.. डिएसपी साब ।”
“अनि खबर के छ ?”
“खबरर हुँ.......अँ ...।”
“खबर पाइसकेको छु डराउनुपदैन ।”
“डर लागिहाल्छ नि ।”
“हो लाग्छ । मनको चोरलाई डर लाग्ने भइहाल्यो पक्राउ खाएपछि ।”
आकाक्षा डरले पानी पानी हुन्छिन् । केही बोल्न सक्दिनन् ।
“भैगो उजुरी परेरको छ अब हथकडी लगाउनु आउनुपर्ला ।”
सिस्टर आकाङ्क्षाको दिमागले काम गर्न सकिरहेको छैन के भन्ने कि , के गर्ने भनेर ।
“भोलिको समय कस्तो छ भेट हुन सक्छ ? भेटन अनुकुल छ ?”
“अँ हुन्छ । मेरो अफ छ ।”
डिएसपी हेमन्तको फोन आएदेखि सिस्टर आकाङक्षाको दिमागमा ठीकमा छैन । के गरुँ, कता जाउँ, कसलाई भनुँ भइरहन्छ । मनमा बेचैनको सुनामीले लखेटिरहन्छ । अन्तिममा एक जना मिल्ने साथीलाई सबै कुरा सेयर गर्ने विचार गर्छिन । साथीलाई सबैकुरा भने पछि मन शान्त हुन्छ । साथीले पनि केही सरसल्लाह सुझाव दिन्छिन् ।
भोलिपल्ट निर्धारित समयमा डिएसपी हेमन्तसँग सिस्टर आकाङ्क्षाको भेट हुन्छ । त्यसठाउँमा घुम्न आउने प्रणयजोडी देखेर आकाङक्षाको मनको डर हराउँदै जान्छ ।
डिएसपी हेमन्त सामान्य कुराबाट कुरा थाल्छन् ।
“यतिका मनका कुरा यतिका दिनसम्म कसरी लुकाउन सकेको होला ? ”
“नराखेको भए अहिले भेट नहनु सक्थ्यो नि । ”
“हो यो कुरा पक्का हो । ”
“मेरो कुरामा कतिको विश्वास लाग्यो ? ”
“विश्वास लागेर न भेट्न बोलाएको नि । तर यो कथा त एउटा निमित्त मात्रै हो । हाम्रो भेट हुनाका लागि । आखिर प्रेमी पे्रमिकालाई भेट गर्न एउटा बहाना त चाहियो नि होइन ? कोही कथाको, कोही गीतको कोही ठक्करबाट पनि त प्रेम गर्ने बहाना त चाहिन्छ नि । होइन र ? ”
“तर मलाई यी सब कुरामा विश्वास छैन । म जहिले पनि आत्माको कुरा सुन्छु ।” सिस्टर आकाङ्का अलिक कठोर भएर भन्छिन् ।
सिस्टर आकाक्षाको भावानामा तुषारापात परेको महसुस गर्छ हेमन्त अनि फकाउने सुत्र प्रयोग गर्छ
“मैले त ठट्टा पो गरेको त । त्यसो त म पनि त्यति सजिलै यो अवस्थामा आउने भए अहिले दुई बच्चाको बाउ भइसक्थेँ । ”
डिएसपी हेमन्तको कुरा सुनेर सिस्टर आकाक्षाको मुखबाट हाँसोको फोहरा छुट्छ । यही मौका छोपेर डिएसपी हेमन्त उनको हात समाएर गहिरो चुम्बन गर्छन् । सिस्टर आकाङ्क्षा लाजले आँखा चिम्म गर्छिन् । दुई जनाको बग्दै गरेको जीवनको खोलामा प्रेमको गहिरो बाँध बाँधिन्छ । समय त्यही बाँधमा बाँधिन्छ ।
सुत्रधारः डिएसपी हेमन्त र सिस्टर आकाङ्क्षाको भेटपछि जीवनले नयाँ गोरेटो कोर्न थाल्छ । उनीहरू आफ्नो मिलनलाई प्रमाणिकता प्रदान गर्न चाँडै नै विवाह बन्धनमा बाधिने योजना बनाउन थाल्छन् । एकातिर डिएसपी हेमन्त आफ्नो जीवनलाइ सिस्टर आकाङ्क्षासँग पूर्णता दिन लागि पर्छन भने अर्कोतिर एउटा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट प्रहरीको छवि बोकेर कालाबजारिया, घुसखोरी र भष्ट्राचारीहरूको आँखाको कसिङ्गर बन्न पुग्छन् । जताततै उनको इमान्दारीताको प्रशंसा भइरहेको हुन्छ । तर अचानक एकदिन मन्त्रीको पहुचमा भएको कालाबजारियालाई भन्डाफोड गर्न पुग्छन र डनबाट मारिन्छन् । डिएसपी हेमन्तको हत्यापछि सिस्टर आकाङ्क्षा पागलजस्तै बन्न पुग्छिन् । उनी गुन्डाहरूसँग बदला लिने प्रपन्च मिलाउन थाल्छिन् । यसै सन्दर्भमा उनी बलात्कृत भई मारिन्छिन् । एउटा अधुरो प्रेम कथा फेरि जन्मन्छ । प्रत्येक युगसँगै यो प्रेम कथा जन्मन्छ अनि प्रत्येक युगमा अधुरो भएर समाप्त हुन्छ । सायद डिएसपी हेमन्त र सिस्टर आकाङ्क्षाको जन्म अर्को जन्ममा हुनेछ जसरी रत्नमाया र हिराकाजीको भएको थियो । उनीहरूको कथा सुरु भएर यसरी नै कथा अन्त हुनेछ । सतीले सरापेको हाम्रो देशमा यस्ता राष्ट्रप्रेमीहरूको कथा र सतीको कथा यसरी नै सुरु हुन्छ अनि यसरी नै समाप्त हुन्छ । प्रत्येक युगमा समयसँगै बिडम्बनाको भारीले भरिएको कथा पढ्न हामी पाठकहरू यसरी नै बाध्य हुनेछौँ । कथाका शब्दहरू प्रतिध्वनित आवाज भएर यो ब्रहाम्डमा गुन्जिरहन्छन् ।